चिनियाँ भनिएका बिजुली बस Made in India ! - Maxon Khabar
Home / News / चिनियाँ भनिएका बिजुली बस Made in India !
चिनियाँ भनिएका बिजुली बस Made in India !
नेपाल सरकारले टेन्डर गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका5विद्युतीय बस भारतमा बनेको खुल्न आएको छ । पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्दा बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो ।
समितिले बसमा १७ वटा कैफियत (बदमासी) औंल्याएको छ । बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
अध्ययनक्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सबीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनमा तोकिएभन्दा ती बस कमसल र गुणस्तरहीन पाइएपछि मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ, उसको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ
मन्त्रालयले टेन्डर गरी २ करोड रुपैयामा बस लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरेको हो । प्राविधिकले स्पेसिफिकेसनअनुसारका बस आए–नआएको अध्ययन गर्नुअगावै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउन ल्याइएका ती बस परीक्षणका लागि काठमाडौंमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
उद्घाटन क्रममा ओली ती बस चढेर सिंहदरबार गएका थिए । परीक्षणक्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि उद्घाटन गरिए पनि ती बस सञ्चालनमा छैनन् । टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीको पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदूषणरहित यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ती बस ल्याएको हो ।
प्राविधिक समितिको निष्कर्ष यस्तो छ
* विद्युतीय बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य
* पाङ्ग्राका नटहरू सबैजसो खिया लागेको
*स्पेसिफिसनभन्दा फरक र मापदण्डभन्दा कमसल – सम्झौताभन्दा फरक मोडल र कम तौल
* अपाङ्गलाई चढाउने लिफ्ट बिग्रिएको
* सिट कभर च्यातिएको र कमजोर सिसा राखिएको
* आगो निभाउन राखिएका उपकरण गुणस्तरहीन
*बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर
*उत्पादन मिति अस्पष्ट
* ढोका बिग्रिएको, स्पिड मिटरले सही सूचना नदिएको